के म ब्रान्ड-नाम औषधिहरूमा एकलकेयर कार्ड प्रयोग गर्न सक्छु? - कम्पनी | सेप्टेम्बर 2021
प्रेस मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि बनाम मित्र घरपालुवा जनावर खेलहरु समुदाय स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि जानकारी, समाचार समुदाय, कल्याण कम्पनी, चेकआउट भारी खेल समाचार, कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> कम्पनी >> के म ब्रान्ड-नाम औषधिहरूमा एकलकेयर प्रयोग गर्न सक्छु?
के म ब्रान्ड-नाम औषधिहरूमा एकलकेयर प्रयोग गर्न सक्छु?
तपाईं आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट प्राप्त लगभग कुनै पनि प्रिस्क्रिप्शनमा सिंगलकेयर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो ब्रान्ड नाम औषधि सामिल छ। हाम्रो आरएक्स बचत कार्डले तपाईलाई आफ्नो औषधिमा %०% सम्म बचाउन मद्दत पुर्‍याउँछ - केही काउन्टर उपचार पनि।
एकलकेयरले कसरी काम गर्दछ?
हामीसँग फार्मेसीहरु संग सीधा सम्बन्ध छ कि हामी तपाइँलाई कम मूल्यहरु, नि: शुल्क प्रदान गर्न को लागी। केवल तपाईंको प्रिस्क्रिप्शनको लागि खोजी गर्नुहोस् singlecare.com वा मा एकलकेयर अनुप्रयोग । तपाईंको स्थान छनौट गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईंको प्रिस्क्रिप्शन नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् — कि त ब्रान्ड, वा जेनेरिक।
तपाईंले आफ्नो औषधि चयन गरेपछि, तपाईं फिल्टर गर्नुहोस् जेनेरिक वा ब्रान्ड नाम । जेनेरिक र ब्रान्ड नाम औषधिहरूमा उही सक्रिय तत्वहरू छन्। केही अपवादहरूको साथ, जेनेरिक औषधिहरू उनीहरूको ब्रान्ड-नाम समकक्षहरूको समान प्रभावकारिता हुन्। मुख्य भिन्नता भनेको मूल्य हो। सामान्य औषधिहरू .०% देखि to 85% कम महँगो हुन सक्छ। दुबै विकल्पहरू जाँच गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई सबैभन्दा ठूलो बचत दिन्छ।
सम्बन्धित: के जेनेरिक ड्रग्स ब्रान्ड-नाम औषधि जतिकै राम्रो छन्?
त्यसो भए, सबैभन्दा सहि मूल्यहरू प्राप्त गर्न, तपाईं निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुनेछ फारम (अर्थात् क्याप्सूल, ट्याबलेट, आदि), खुराक (उदाहरण कति मिलिग्राम), र मात्रा (जस्तै, गोली संख्या)।
केवल पाठ, छाप्नुहोस्, ईमेल गर्नुहोस्, वा तपाईंको डिजिटल वालेटमा कुपन थप्नुहोस्, त्यसपछि फार्मेसी काउन्टरमा जब तपाईं आफ्नो औषधि लिनुहुन्छ, जब यो ल्याउनुहोस्।
एकलकेयर कसले प्रयोग गर्न सक्दछ?
हाम्रो कार्ड कोहीले पनि प्रयोग गर्न सक्दछ - चाहे तपाईसँग बीमा छ वा छैन। यद्यपि यो तपाईको बीमा कार्डको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन। त्यसोभए तपाईसँग प्रिस्क्रिप्शन कभरेज छ भने तपाईले हाम्रा मूल्यहरू तपाईको कोपेसँग तुलना गर्नुपर्दछ। यदि तपाईंसँग बीमा छैन भने, तपाईं हाम्रो मूल्य नगद खुद्रा मूल्यसँग तुलना गर्नुपर्छ।
यस्तो समय आउनेछ जब तपाईंको स्वास्थ्य बीमाले कम मूल्य प्रस्ताव गर्दछ, र यस्तो समय आउनेछ जब सिंगलकेयरले बजारमा औषधिहरूको लागि सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्दछ। त्यसकारण हामी हाम्रा ग्राहकहरुलाई लाग्ने औषधि मूल्यहरु तुलना गर्न र सबैभन्दा बढी बचत गर्ने छनौट गर्न हौसला दिन्छौं। हाम्रो मूल्य ईतिहास ईतिहास चार्टले यो देख्न सजिलो बनाउँदछ कि तपाईं सिंगलकेयरमा कति बचत गर्नुहुन्छ।
सम्बन्धित: के म ओटीसी मेडसको लागि सिंगलकेयर प्रयोग गर्न सक्छु?
के पकड हो? त्यहाँ एक छैन! सिंगलकेयरमा हामी विश्वास गर्दछौं कि राम्रो महसुस गर्नु दुखदायी हुनु हुँदैन। 35 35,००० भन्दा बढि फार्मेसीहरूसँग हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्धको मतलब भनेको हामी धेरै औषधिहरूमा कम मूल्यहरू सेट गर्न सक्छौं। तपाइँको एकलकेयर कार्ड तपाइँको स्थानीय फार्मासिष्टलाई देखाउनुहोस् र औषधीमा ठूलो बचत गर्नुहोस् जुन वास्तवमै महत्वपूर्ण छ।यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने, हामीलाई १-84444-२34-30 at557 मा कल गर्नुहोस् वा हामीलाई पत्ता लगाउनुहोस् फेसबुक ।
मधुमेह रगतमा चिनीको स्तर के हुनुपर्छ
Briana Aguirre:5छिटो तथ्य तपाइँ जान्न आवश्यक छ
म कसरी थाहा पाउन सक्छु कि एक नुस्खा कति खर्च हुनेछ
बीमा बिना एक gyno नियुक्ति कति छ
म कति पटक mg०० मिलीग्राम ibuprofen लिन सक्छु?
डेक्सामेथासोनले शरीरलाई के गर्छ?
म कति टायलेनोल ४ लिन सक्छु
के म xanax पछि hours घण्टा ambien लिन सक्छु